कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या १ लाख १९ हजार ६९२ पुग्यो, कति छन् संक्रमित ? — Imandarmedia.com
कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या १ लाख १९ हजार ६९२ पुग्यो, कति छन् संक्रमित ?
काठमाडौं । विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिएका कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या १ लाख १९ हजार ६९२ पुगेको छ । विश्वमा १९ लाख २४ हजार ६७९ संक्रमित छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा मात्र ७२ हजार ४९२ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् ।